Lahatsary Hafainganina Ahitàna Rahona Toa Ranomasina Mitety An’i Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary Hafainganina Ahitàna Rahona Toa Ranomasina Mitety An'i Hong Kong
Voadika ny 16 Avrily 2016 5:02 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, русский, Español, 日本語, English
Pikantsary nalaina avy tamin'ilay Beautiful Sea of Cloud an'i Wandering Photography.
Rehefa mieritreritra momba an'i Hong Kong ianareo, dia azo antoka fa haka sary an-tsaina tanàna iray tsara voatra ifaneraseran'ny olona samihafa fiaviana, maresaka, ary iantranoan'ireo fandraharahana iraisampirenena sy toeram-piantsenana avo lenta. Na mahasarika mpizahatany marobe aza ilay tanàna, ny ankamaroan'izy ireny tsy tonga handany andro hizaha izay mahavariana amin'ny tontolo manodidina ao aminy. Na ny ankabeazan'ny mponina ao an-toerana aza tsy tonga saina amin'ny hatsaràna natoralin'ny tanànany.
Nanokan-tena ny Wandering Photography, tarika misy mpakasary telo, hampahafantatra io lafy iray tsy dia fantatra loatra amin'i Hong Kong io, amin'ny alàlan'ny saripika sy lahatsary nohafainganina. Ny vokatra tsara indrindra avy amin-dry zareo dia lahatsary iray nohafainganina mampiseho rahona toa ranomasina avy aminà toerana enina samihafa ao Hong Kong, isan'ireny i Tung Shan, Tai To Yan, Dong Yeung Shan, Victoria Peak, Lugard Road, ary Tai Mo Shan:
Manana pejy Facebook ireo mpakasary ireo, toerana izaràn-dry zareo ny asany ho hitan'ny daholobe. Amin'ny fanolorana ny hatsaran'ny tanàna, manantena ry zareo fa ho tia sy sarotiny amin'ny taniny ireo mponina ao Hong Kong:
Trano mijoalajoala manaka-danintra no mamefy ilay tanàna, izay toa alan-tsimenitra. Ambony be ny hakitroky ny mponina. Nefa raha manokana fotoana ianareo hamantarana ilay tanàna, dia tena faran'izay akaiky kely ny hakanto natoralin'ny tontolony. Zarain'ny Wandering Photography amin'ny fo madio ho anao ny tontolo natoraly ao an-toerana [izay voatahiry ao anatin'reo saripika nalainay]. Eto isika dia mahita ny hakanton'ny masoandro miposaka, tsy mena-mitaha amin'ireo masoandro miposaka any amin'ny tontolo ivelany any. Ananantsika koa ny alina ravahan'ny kintana, ny faratazana mivolom-bolafotsy ary ny fitosahan'ny rahona toa ranomasina.
Betsaka ny lahatsary nohafainganna azo jerena ao amin'ny fantsona YouTube an'ny Wandering Photography.